Ra’iisul wasaaraha oo sheegay in la magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dalka (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaaraha oo sheegay in la magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dalka (DHAGEYSO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa shaaca ka qaaday in haatan la magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka xilliga doorashooyinka 2016-ka, oo u badan odayaal muddo dheer xilal soo qabtay islamarkaana magac dheer ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed.
Wuxuu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid tilmaamay in guddigaasi uu il-gaar ah ku eegi doonno sida ay u doorashada dalka u dhaceeyso, islamarkaana in hadii ay dhacdo in qof gaar ah loogu shubo doorashada uu guddigaasi dib u eegis ku sameyn doonno.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa dhinaca kale sheegay in guddigaasi ay awood u yeelan doonaan inay laalaan natiijadda kasoo baxdo doorashada islamarkaana ay go’aan ka gaari karaan in hadii ay doorashadaasi u arkaan in la musuq-maasuqay inay soo jeediyaan in markale doorashada dib loogu celiyo.
“Waxaa la sameeyay guddiga khilaafaadka oo ka kooban guddi odayaal ah oo magac dheer ku leh bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda, waana guddi loogu talo-galay, in hadii doorashada la gacmeeyo islamarkaana la musuq-maasuqo, inay dib u eegis ku sameeyaan ayna go’aamiyaan in doorashadaasi dib lagu celin doonno iyo inkale” Sidaas waxaa yiri ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
Dhinaca kale, guddiga khilaafaadka doorashooyinka oo markeedii hore ahaa in la magacaabo bishii hore ayaa dhawaan madaxda madasha Qaranka si hoose usoo xulay guddigaasi, waxayna arrintaan timid kadib markii ay soo baxeen cabasho ah in doorashada dalka lala damacsan yahay in la gacmo-gacmeeyo islamarkaana qof gaar ah la doonayo in doorashada loogu shubo.